Tuesday May 26, 2020 - 12:36:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya wadanka Liibiya ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda Alwifaaq ay lawareegeen deegaanno iyo saldhigyo ciidan oo kuyaalla Koonfurta magaalada caasimadda ah ee Daraabulis.
Kumanaan calooshood ushaqeystayaal Russian ah ayaa ku sugan Liibiya
Kadib dagaallo culus oo sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay hareeraha caasimadda ayay ciidamada xukuumadda ugu suurtagashay in ay la wareegaan inta badan saldhigyadii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka dagaal ooge Khaliifa Xaftar.
Afhayeen uhadlay xukuumadda Alwifaaq ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadoodu ay maamulayaan illaa 7 saldhig oo uu kamid ahaa mucaskarka Alyarmuud oo dhammaatood kaabiga ku haya Daraabulis.
Wararka ayaa intaas ku daraya in maleeshiyaad calooshood ushaqeystayaal Ruushiyaan ah oo taabacsan shirkadda Fangar ay isaga baxeen jiidda dagaalka ee Daraabulis waxayna ubaqooleen dhanka bariga Liibiya.
Wariyaal ayaa soo sheegay in dagaalyahanadan calooshood ushaqeystayaasha ah oo ka barbar dagaallamayay Xaftar ay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha magaalada Binwaliid kadib markii laga saaray jiidda dagaalka.
Kumanaan katirsan ciidamada xukuumadda Alwifaaq oo xagga cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka Turkiga ayaa kaabiga ku haya magaalada Tarhuuna oo qiyaastii 90 Km ujirta Daraabulis ahna meesha kaliya ee laga maamulo olole dagaaleedka Xaftar ee ka dhanka ah galbeedka Liibiya.
Bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay ayaa guul darrooyin is xigxigay dhabarka loo saariyay Jeneraal Xaftar oo ay taageerayaan inta badan dowladaha reergalbeedka iyo kuwa Khaliijka carabta.